Qalbii Archives - Ibsaa Jireenyaa
March 19, 2019 Sammubani Leave a comment
Tawbachuuf wantoota nama gargaaran–Kutaa 2ffaa
Kutaa darbe irraa itti fufuun wantoota tawbachuuf nama gargaaran ni ilaalla:
4-Bakka badiin itti hojjatamuu irraa fagaachu fi dheessu– badiitti taruun akka ibiddatti taruuti. Ibiddi qaama gubbaa guba. Badiin immoo keessa namaa guba. Namni erga ibiddatti taree keessaa bahuuf ni tattaafata. Ta’uu baannan isa gubee fixa. Haaluma kanaan badiis keessaa bahuuf yoo hin tattaafatin keessaa nama gubuun qalbii namaa ajjeesa. Ergasii Guyyaa Murtii ibiddaa keessaa fi ala namaa gubuutti nama geessa.
March 14, 2019 Sammubani Leave a comment
Miidhaa Tawbah tursiisuu
Namni badii erga hojjatee dafee badii isaa amanuun tawbatu, dhugumatti adabbii jalaa baha. Garuu gara fuunduraatti tawbah kan dabarsu yoo ta’ee, rakkoo baay’eef of saaxila. Namoota meeqatu badii keessatti taranii yommuu adabbiin isaanitti bu’uu tawbachuu barbaadan. Garuu yeroon waan irra darbeef carraa tawbatanii adabbii jalaa itti bahan ni dhaban. Namni yeroon yoo hin tawbatin, du’aan ykn Qiyaamaan dhooyun carraa tawba dhaba. Ergasii gaabbi cimaa gaabba. Namni badii hojjataa turee yommuu duuti itti dhuftu dhugaan waan isatti mul’atuuf tawbachuu barbaada. Kanaafi Qur’aana keessatti akkana jedha: